डोरमणिले काम गर्न सक्नुभएन, अल्पमतमा हुनुहुन्छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य डोरमणिले काम गर्न सक्नुभएन, अल्पमतमा हुनुहुन्छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य
बागमती प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाभित्र अन्तरकलह देखा परेको छ । नेकपाका प्रदेश सांसदहरुको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म पुगेको छ ।
कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको चर्चा समेत चलिरहेका बेला नेकपा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको स्वीकार गरेकी छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले मंगलबार रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरे । तर, त्यसमा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरुको सहमति थिएन ।
पार्टी इञ्चार्ज शाक्यले हस्तक्षेप गरेकै कारण केही दिन फुयालको सपथग्रहण रोकिएको थियो । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाटै स्वीकृति पाएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले फुयाललाई मन्त्री बनाए ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध माधव नेपाल पक्षमात्र होइन, पूर्वमाओवादी पक्षका प्रदेश सदस्यहरु पनि एकजुट भएका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्रीहरु शालिकराम जमरकट्टेल र युवराज दुलाल मुख्यमन्त्री पौडेलसँग असन्तुष्ट छन् ।
प्रदेशको राजधानी तोक्न केन्द्रको हस्तक्षेप गराएका मुख्यमन्त्री कार्यक्षमता र शैली दुबैका कारण एक्लिँदै गएको प्रदेश इञ्चार्ज शाक्यले बताइन् । पार्टीको प्रदेश कमिटीले सरकार चलाउनुपर्नेमा, केन्द्रको आडमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश पार्टीलाई बाइपास गरेको शाक्यको आरोप छ ।
तत्कालीन एमालेमा समेत प्रदेश इञ्चार्ज रहेकी शाक्य आफंै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिइन् । तर, संसदीय दलको निर्वाचनमा गुटगत रुपमा प्रदेश सदस्यहरु विभाजित हुँदा ओली गुटबाट उम्मेदवार बनेका डोरमणि पौडेल दलको नेता निर्वाचित भए ।
त्यसयता मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश कमिटी होइन, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेश मात्र पालना गरेको आरोप अशन्तुष्ट पक्षको छ । पार्टीमा डोरमणिभन्दा सिनियर नेताहरु प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, अरुण नेपाल लगायतका नेताहरु मुख्यमन्त्री पौडेल भन्दा सिनियर हुन् । तर, दलको चुनावमा पौडेलले जितेपछि उनी मुख्यमन्त्री बने ।
हेटांैडाको मेयर तथा नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुँदा विकेन्द्रीकरणको पक्षमा राम्रो भूमिका खेलेका पौडेलले मुख्यमन्त्रीका रुपमा भने अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् ।
हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने बेला धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरु उनीसँग रुष्ट बने । त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउनेसम्मका चलखेल भइरहेका बेला अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले नेकपाकी बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग कुराकानी गरेका छन् ।
शाक्यले मुख्यमन्त्री हटाउने कुरा प्रदेश कमिटीले नगरे पनि उनी अल्पमतमा परेको भने खुलासा गरिन् । प्रस्तुत छ, शाक्यसँगको कुराकानी–
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा तपाईको आपत्ति किन ?
प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकार चलाउनुपर्नेमा उहाँले अटेर गरेकाले आपत्ति हो । हामी अस्ति भर्खरै मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी बसेर बैठक गरेका थियौं । बेला–बेलामा हामी प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग बैठक बस्छौं । अस्ति पनि हेटौंडामा बैठक बसेका थियौं । हामीले प्रदेश सरकारको २ वर्षको समीक्षा राम्रोसँग गर्नुस भन्यौं ।
कमी कमजोरी सच्याएर नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नपर्छ, अब स्थायी योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ भनेको हो । अब अस्थायी मानसिकता त सकियो नि राजधानी स्थायी भइसकेपछि । सम्पूर्ण स्थायी संरचनाबाट जानुपर्‍यो, योजना त्यही ढंंगले लैजानुपर्‍यो । प्रादेशिक योजनामा ध्यान दिनुस, खुद्रे योजनामा नलाग्नुस् भनेका थियौं ।
आफूकेन्द्रित बजेट बनाउने कुराले यो मुख्यमन्त्री हुँदैभएन भन्ने कुरा मैले पनि सुन्छु । त्यस्तो अभिव्यक्ति छ । तर, अब हटाइहाल्नुपर्छ भनेर एक/दुई जनाले मात्र भनेर हुन्न, यो त पार्टीको मामिला हो ।
समावेशी छैन, महिलाको प्रतिनिधित्व छैन भनेर कत्रो आपत्ति आइरहेको छ । त्यसैले अहिले नै रामेश्वरलाई दिन हतार नगर्नुस्, एकैचोटि सबै मन्त्रीहरु कतिजना थप्ने, कसरी विस्तार गर्ने, को–को राख्ने, अनि मन्त्रालय कुन–कुन कसरी विभाजन गर्ने, सबै कुरा पछि सोचौंला । प्रदेश कमिटीबाट सरकार चल्नुपर्छ, केपी कमरेडले पनि त्यही भन्नुभएको छ ।
हामी प्रदेश कमिटीको बैठक बसौंला, सल्लाह गरौंला अनिमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुस् भनेका थियौं । हामीले त्यसो भनेपछि डोरमणि कमरेड रिसाउनुभयो । त्यो दिन रामेश्वरको नियुक्ति रोकियो । त्यो दिन माथिबाटै हाम्रो दबावले रोक्नुभयो । त्यसमा प्रदेशको अध्यक्ष, इञ्चार्ज, सहइन्चार्ज सचिव कसैको पनि सहमति थिएन । हिजो त अचानक सपथग्रहण भएछ । त्यहाँका मन्त्रीहरुलाई थाहा छैन । कसैलाई पनि थाहा छैन ।
साँच्चै नै तपाईलाई भनौं, डोरमणि पौडेल कमरेड धेरै हिसाबले पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट विस्थापित हुनुभएको छ । १३ वटा जिल्लालाई उहाँले न्यायोचित वितरण पनि गर्नुभएन । आर्थिक हिसाबले बजेट सही विनियोजन भएन । अझ कतिपय जिल्लामा त शून्य पारिएको छ । मन नपरेका आधारमा त्यस्तो भएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावको कुरा अहिले सोचिएको छैन । आक्रोश पैदा भएको छ । राजधानीको सवालमा आक्रोश व्यक्त भयो । कसैलाई पायक पर्दैन हेटौंडा, काभ्रेमा लानुपर्छ भन्ने अधिकांश सांसदको भनाइ थियो । पार्टीको ह्वीप मान्न सांसदहरु बाध्य भए । आँखामा आँशु झारेर, रोएर भोट हालेका छन् । त्यस्तो पीडा सहेर पनि सांसदहरुले पार्टीको आदेश पालना गरेका छन् । यो भावना मुख्यमन्त्रीले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? कुरा यो हो ।
तर, उहाँले बुझ्नुहुन्न, अझ पीडा दिनुहुन्छ । बजेट पनि न्यायोचित वितरण गर्नुहुन्न । आफूकेन्द्रित बजेट बनाउने कुराले यो मुख्यमन्त्री हुँदैभएन भन्ने कुरा मैले पनि सुन्छु । त्यस्तो अभिव्यक्ति छ । तर, अब हटाइहाल्नुपर्छ भनेर एक/दुई जनाले मात्र भनेर हुन्न, यो त पार्टीको मामिला हो । सल्लाह गरेरमात्रै जानुपर्छ ।
त्यसका लागि त पार्टीको तर्फबाट मेरो भूमिका हुनुपर्छ नि । म प्रदेश सांसद पनि भएकाले त्योखालको भूमिका मैले त्यहाँ पनि खेलेकै छु । दलको बैठक त, मैले कस्तो–कस्तो अप्ठेरोमा उहाँलाई साथ दिएर सफल बनाएको छु । अप्ठेरोमा उहाँलाई कति साथ दिएको छु, उहाँलाईनै सोध्नुस न ।
अब अहिले मैले यो भन्ने स्थिति छैन । पार्टी नेतृत्वले मूल्यांकन गरोस, सोचोस भन्ने नै हो । ५ वर्षमा जनताले कस्तो काम गरे गरेनन् छुट्याउने कुरा हो । २ वर्ष भयो, जनताले महशुस गरेका होलान्, मैले भन्नुभन्दा पनि । यसमा कुनै इगो छैन है । सरकार सफल बनाउन मैले हर तरहले सहयोग गरेकी छु ।
मैले त माथिबाट हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्ने हो, उहाँहरुले सोच्नुपर्ने कुरा हो । उहाँहरुले त सहज बनाइदिनुपर्ने हो । प्रदेश सरकार प्रदेश कमिटीको मातहतमा चल्नुपर्छ भनेर मुखले भन्ने, तर व्यवहार त्यस्तो दखाउनुपर्दैन ? जहिले पनि अप्ठेरो मात्र पार्ने कुरा त ठीक भएन नि । यसले त केन्द्रीय सरकारलाई पनि घाटा पुर्‍याउँछ । यो प्रदेश त केन्द्रको राजधानीसमेत भएको ठाउँ हो । हस्तक्षेप गर्नेहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
ज–जसले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, सबैलाई हो । मेरो कुनै स्वार्थ छैन । पार्टी र सरकार बलियो हुनुपर्छ । मलाई कुनै आशा पनि छैन । लेनदेन पनि छैन । मेरो चाहना प्रदेश सरकार राम्रोसँग चलोस्, विकासको काम गरोस् र जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने महशुस गरुन् भन्ने हो । प्रदेश सरकार प्रदेश पार्र्टीको निर्देशनमा चलोस् ।